Burburka Volcano Hawaii Abuurista Tayada Hawada oo Liidata
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Burburka Volcano Hawaii Abuurista Tayada Hawada oo Liidata
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Volcano Hawaii ayaa qarxaysa vog
Dadka deggan Hawai'i iyo kuwa soo booqda waxaa lagula talinayaa inay u diyaargaroobaan oo ay ka warqabaan xaaladaha ku xeeran, iyo sida ay dareemayaan ama ay uga falcelin karaan vog - qiiqa folkaanaha - hawada ka soo jeeda Jasiiradda Weyn ee Hawaii.
Sababtoo ah qarax ka qarxay shalay godka Halema'uma'u ee shirweynihii Volcano Kīlauea, xaaladaha vog iyo sulfur dioxide (SO₂) heerarka hawada ayaa sii kordhaya oo isbedelaya.
Dhaqdhaqaaqa khalkhalka ahi wuxuu ku dhex yaalaa Beerta Qaranka ee Volcanoes ee Hawaiʻi, si kastaba ha ahaatee, xaaladaha dabaysha oo is -beddelaya waxay abuureen dhibaatooyin xagga tayada hawada ah oo is -dhaafsan galbeedka shir -weynaha.
Meelaha ay saamaysay waxaa ka mid ah Pahala, Nāʻālehu, Ocean View, Hilo, iyo East Hawai'i.
Tayada hawada oo liidata iyo heerarka SO₂ oo kordhay tan iyo markii bilowgii qarxinta waxay sababi kartaa dhibaatooyin xagga caafimaadka neefsashada, gaar ahaan shakhsiyaadka xasaasiga ah. Xaaladaha ayaa si degdeg ah isu beddelaya, tayada hawada oo liidata oo keenta saamayn caafimaad ayaa laga yaabaa inay noqoto mid aad u kooban.
Haddii ay jiraan xaalado vog, tallaabooyinka taxaddarrada soo socda ayaa lagula talinayaa:
Yaree waxqabadyada dibadda ee keena neefsashada culus. Ka fogaanshaha dhaqdhaqaaqa dibadda iyo jimicsiga inta lagu jiro xaaladaha vog waxay yareyn kartaa soo -gaadhista waxayna yareyn kartaa halista caafimaad. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay kooxaha xasaasiga ah sida carruurta, waayeelka, iyo shakhsiyaadka qaba xaalado neefsasho oo hore u jiray oo ay ka mid yihiin neefta, boronkiit, emphysema, iyo cudurrada sambabka iyo wadnaha ee joogtada ah.
Gudaha joog oo xidh dariishadaha iyo albaabada. Haddii qaboojiye la isticmaalo, u deji si uu dib ugu noqdo.
Haddii aad u baahan tahay inaad ka guurto meel ay saamaysay, shid qaboojiyaha baabuurka oo u deji si uu dib ugu noqdo.
Had iyo jeer dawooyinka gacanta ku hay oo diyaar u ah.
Daawooyinka maalinlaha ah ee loogu talagalay cudurrada neef -mareenka waa in la qaataa jadwalka waxaana laga yaabaa inay ka ilaaliyaan saamaynta sulfur dioxide.
Xusuusnow in daboolka wejiga iyo maaskaro loo isticmaalo ka hortagga faafitaanka COVID-19 aysan ka ilaalinayn SO₂ ama vog.
La xiriir dhakhtar sida ugu dhakhsaha badan haddii ay jiraan dhibaatooyin caafimaad.
Ha cabin sigaar kana fogow qiiqa gacan labaad.
Cab cabitaano badan si aad uga fogaato fuuqbax.
In la diyaariyo oo la diyaariyo qorshooyinka gurmadka qoyska.
Digniinaha digniinta ah ee saraakiisha maamulka degdegga ah ee gobolka iyo gobolka.
Booqdayaasha Beerta Qaranka ee Volcanoes ee Hawaiʻi waa inay ogaadaan in dhagaxa dhagaxa iyo qaraxyadu ay soo saari karaan dambas ka samaysan muraayad foolkaano iyo jajab dhagaxa ah. Duufaannadani hadda waxay u taagan yihiin khatar yar, laakiin boodhka dambaska ee meelaha ku xeeran shirweynaha Kīlauea waa suurtogal.
Waaxda Caafimaadka Hawai'i (DOH) waxay ku dhiirri -gelinaysaa dadka deegaanka iyo booqdayaasha inay adeegsadaan kheyraadka soo socda ee bixiya macluumaad dhammaystiran, cad oo hadda ah oo ku saabsan saamaynta caafimaad ee vog, sida loo ilaaliyo naftaada, saadaasha vog iyo dabaysha, tayada hawada, xaaladaha is beddelaya , iyo talooyinka booqdayaasha:
Dashboard -ka Macluumaadka Vog ee Is -dhexgalka Hawaiʻi si aad u hesho xogta internetka ee ugu dhammaystiran uguna casrisan vog iyo SO₂ oo ka socota hawsha folkaanaha.
Laanta Hawada Nadiifka ah ee DOH waxay haysaa shabakad waqtiga dhow u dhow oo kormeerayaasha tayada hawada ee ogaata SO₂ iyo walxaha walxaha.
Ururka Juqraafiga Mareykanka (USGS) Cusboonaysiinta Volcano Kilauea.
Adeegga Seerayaasha Qaranka macluumaad ku saabsan si ammaan ah u booqashada Beerta Qaranka ee Volcanoes Hawaiʻi.
Hagaha DOH ee Muddada Gaaban Heerarka La -talinta ee SO₂.
Daruuraha Oo Waxyeelo Soo Gaadhay Xishoodka Shaqaalaha awgeed
Burgers Chicken by Longo Hadda dib loo soo celiyay
Taliban ayaa diyaar u ah inay dib u bilowdo howlihii gegida dayuuradaha ee Kabul ...
Maaddaama xayiraadaha safarka Mareykanka ay fududaanayaan, safarada UK waxay ...
Imaatinka booqdaha Hawaii iyo kharashka ayaa hoos u dhacay...
Sharci cusub oo ku baaqaya shirka Aqalka Cad ee...
Air Canada waxay ku daraysaa awood dheeraad ah Vancouver
Awaamiirta cusub ee COVID-19 ee Entebbe
Muwaadiniinta Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa loo sheegay inay ka fogaadaan Kabul ...
Boqoradda Elizabeth II ayaa diiday abaalmarinta Oldie of the Year
Wasiirka Dalxiiska Jamaica oo tacsi u diray qoyskii iyo qaraabadii...
Ganacsi xiiso leh oo ka dhacaya IMEX America
Meheradda ugu Fiican iyo Hudheelada Spa ee Taipei, Taiwan
Xilli-ciyaareedka barafka cusub ee Yurub ayaa ku laalaada dheelitirka
Dhimashada COVID-10 ee Russia bishii Sebtembar ayaa laba jibaartay…
Warbixinta halista cusub ee CDC ee tallaalka COVID -da saddexaad
Quful buuxa, tallaalka qasabka ah ee dalka oo dhan...
Ikhtiyaarada Dal-ku-galka Cusub ee Dalxiiska ayaa Korin kara Dalxiiska GCC
Turkiga ayaa ku hanjabay inuu eryi doono Mareykanka iyo 9 safiir oo kale
Brits: naga saar guriga oo fasax naga bax
Maxkamadda Racfaanka ee Amsterdam: Scythian Gold waxaa iska leh...
Sida loo Qorsheeyo oo loo tijaabiyo Qalabka Ugaadhsiga Dalkii Dambe?
Kirk Ziehm ayaa loo magacaabay maamulaha cusub ee Buildout
WestJet waxay tijaabinaysaa Boarding cusub oo la aamini karo
Balanqaadyada duulimaadka ee USA ayaa kor u kacay
Boeing waxay xalisay kiisaska madaniga ah ee MAX laakiin FlyersRights ...
Baabuurka Isafgaradka Isboortiga ee Cusub
Madaxweynaha oo daahfuray sheybaar cusub oo qasab ah oo COVID-19 ah ...
Ugu yaraan 27 qof ayaa ku dhintay musiibo ka dhacday kanaalka Ingiriiska
Diyaaradda EgyptAir ayaa dib ugu laabatay magaalada Qaahira kadib markii ay u hanjabtay...